Nyika dzakabatana California San Francisco
Kwamunoenda kunofamba muSan Francisco Bay Area uye Santa Cruz
Kutsvaga nzvimbo yekuenda kufambisa muSan Francisco? Kune zvikwata zvakawanda zvekusarudza kubva uye vazhinji vavo vari kumaodzanyemba kweguta pano muSan Mateo County uye muSanta Cruz.
Kufukura muSan Francisco haisi yekushaya mwoyo. Mvura inotonhora - iwe unoda kupfeka wetsuit gore rose uye munguva yechando, bhoti, uye hoods. Nzvimbo idzi dzeBay Area dziri kumhenderekedzo dzakasimudza uye dzakaoma mamiriro ezvinhu, kusanganisira yakakurumbira guru guru wave surf break, Mavericks. Kune mavambo mashomanana anotanga kune avo vanoda kudzidza kudzidzira muSan Francisco nekupoteredza.
Pano ndiyo yakanakisisa yeSan Francisco mabheji ekufambisa, kutanga kweguta kumusoro, kumaodzanyemba kusvika kuSanta Cruz.
Fort Point ingangove imwe yenzvimbo dzakanakisisa dzinosvika panzvimbo dzepasi pose. Iyi kuputsa iri mukati meSan Francisco Bay , pasi peGoard Gate Bridge uye pedyo neSouth Point National Historic Site. Pamazuva akareba kwazvo, mhepo inoyerera inotanga pasi pechibhiri uye ichiputika pamakiromita 90-degree mumupako. Iyi kuputsa kunopa mukana wekufuratira mumumvuri wechinzvimbo ichi chinoshamisa uye maonero eMarin Headlands, North Bay, uye guta skyline.
Kuva mukati mechikepe, zvakadzivirirwa kubva kumvura inovhuvhuta yakavhurika. Munguva yechando, kunyange zvakadaro, marwi anogona kuva akasimba zvikuru achiita kuti zvive zvakaoma kuputika kunze. Dzimwe nguva magwenzi ekuputika anosvika munzvimbo yacho. Kuputsa kwakakonzerwa nematombo saka iwe unofanirwa kuva wakangwarira paunenge uchidzima - vazhinji vekugara vaine helmets, chero bedzi.
Zviri nyore kupinda, paki pedyo nebhurogi, famba uchienda kumvura uye unokwira pamusoro pematombo. Ngwarira - idzi matombo ari kupera.
Nhamba: Pakati pepamusoro kuenda mberi
Ocean Beach, kuSan Francisco
Jayms Ramirez / Getty Images
Mahombekombe Gungwa ndeyendarira yakareba yejecha riri kumhanya richibva kuCliff House yekudyara kumaodzanyemba, kumaodzanyemba kusvika kumativi ose eSloat Boulevard uye Great Highway. Kune vanhu vana vanoputika pamahombekombe egungwa, anonzi Kellys, VFW, The Dunes, uye Sloat.
Gungwa chikamu cheAcean Beach chinonyanya kufarirwa nevanhu vekumba, asi haisi nzvimbo yakachengeteka yekushambira. Zvinowanzoitika ipapo zvinoita kuti zvigone kuwanika kune vanoziva zvakanyanya. Iyo paddle-out yakaoma zvikuru uye kune nguva dzose nguva dzose yakasimwa yakasimba ikozvino.
Linda Mar, Pacifica State Beach, Pacifica
Connie Spinardi / Getty Images
Linda Mar inowanzozivikanwa nekuputika muhombe paPacifica State Beach. Kuvhuvhuta hakusi nyore, asi kana iri parutivi ruduku, inzvimbo yakanaka yevashandi vekutanga. Mafungu acho anowedzera kana uchikwira kuchamhembe kumucheto kwegungwa, kuitira kuti iwe uwane zviri nani iwe unogona kuzvidzivirira nekuenda mberi kuchamhembe.
Kune nzvimbo yekupakisa pakarepo pedyo nemhenderekedzo yegungwa nemakamuri okuzorora nemvura, inotanga kubva 6am kusvika 10 pm.
Nharaunda: Kutanga kusvika Pakati Pakati
Montara State Beach iri pedyo nenharaunda yacho, ichienda kumaodzanyemba kubva kuPacifica kune Highway 1. Ndiyo hurukuro yegungwa iyo inongova yakakodzera kune vafambisi vepamusoro. Dzimwe nzvimbo dzimwe nguva dzinoidza iyo "mini Mavericks."
Iyi nyika inozivikanwa zvikuru inosvika panzvimbo yepamusoro kune imwe nzvimbo kune imwe nyika inonyanya kuzivikanwa mumarudzi akawanda, iyo yeTitans yaMavericks gore negore. Mugwagwa uri pasi pegungwa unowedzera mafungu anouya kuti aaite dzimwe nguva kusvika mamita makumi mashanu kumusoro. Mafungu acho ane ngozi zvikuru uye anofanira kunge achingova neef surfed.
Princeton Jetty, Princeton-by-the-Sea
Princeton Jetty, Princeton neGungwa. Avelienne / Flickr / CC 2.0
Chinhu chinotanga kukurumidza kuputika kwepakati pekuchamhembe kwePrinceton Harbour, kubva paHoorway 1, pedyo neHalf Moon Bay. Kunyangwe haisi mhepo yakaoma, yakanyanya kupfupi saka haibvumiri nguva yakawanda yevatangi vekutanga kusimudza.
Nhamba: Kutanga kusvika pakati.
Mark Miller / Getty Images
Nzvimbo inozivikanwa yepamusoro-soro yepasi pose iri pasi pechiratidzo chinonzi Santa Cruz lighthouse iyo inogara kumba kweSanta Cruz Surfing Museum (701 W. Cliff Drive, Santa Cruz).
Uku ndiko kutsanya, uye kupera kwemarefu kwenguva refu iyo yakanaka kune vanoziva nezvevasikana. Iwe unofanirwa kupinda uchikwira pasi kubva padenga. Inogona kunge yakazara zvikuru.
Beckett Gladney / Getty Images
Cowell's Beach ndechimwe chezvitsva zvinotanga kubuda pafremu yeBay Area uye zvichida zvose zveCalifornia.
Gungwa iri mukati memvura yakachengetedzwa iri pedyo neSanta Cruz wharf. Kuputsa uku kwakanaka kwenguva refu yevashandi uye inowanzozara. Inonyanya kuzivikanwa pane zvidzidzo zvekutanga uye misasa yezhizha dzezhizha.
Iyi inzvimbo yakakurumbira yemunharaunda yekumabvazuva kweSanta Cruz yakanaka kumativi ose evanhu vanofambira mberi. Pleasure Point inongororwa purogiramu yekare inopa nguva refu, yakachena kufamba mumazuva mazhinji. Iyo nzvimbo isina kugadzikana uye inodonha apo mamwe mabheti ari munzvimbo yacho akazara. Inogona kunge yakanyanyisa zvikuru saka uende ikoko mangwanani uye uve nehanya nevamwe.
Nhamba: Mutangairi, Akapindirana, Akafambiswa
Vatangidziri Verengai Mavara + Zvidzidzo zveSupfu Pedyo neSan Francisco
Linda Mar muPacifica uye kuChwell's Beach muSanta Cruz ndiyo mbiri dzepamusoro dzekutanga vafambisi vepaSan Francisco Bay Area.
Heano mamwe makambani anopa zvidzidzo zvepafesheni muSan Francisco Bay Area:
Kutasvavara kunze - Santa Cruz - Iyi kambani inopa zvidzidzo zvemazuva maviri muSanta Cruz nePacifica.
Cowell's Beach Surf Shop - 30 Front St, Santa Cruz - Kambani iyi inopa zvidzidzo zvepamusoro pedo nechepakuvamba kwepakuvamba kwemafambisi ekutanga kweSanta Cruz Harbour.
NorCal Surf Shop - 5440 Coast Highway, Pacifica - Gear dzimba dzekuvakwa uye zvidzidzo zvepamusoro-soro zvine ruzivo rwakanyanya kuLinda Mar kuputsa.
Nepamusoro 9 Zvinhu Zvokuita muNorth Beach
Kubva kuSan Francisco kuenda kuJosemite National Park
Marin Civic Center naFrank Lloyd Wright
Nzira Yokupemberera Gore Idzva Rakawanda muSilicon Valley
Ndekupi Kwokudya Pamutengo Wemari muvana kuLondon
Caojiadu Flower Market muShanghai
Urban Outdoor Adventures muTexas
Nhau Pamhepo Inofamba - TSA 311 Mutemo weAngoro Kutakura masaga
Cinco de Mayo Mhemberero muU.SA
Peji yePakiti yeGermany
Charlotte Restaurants pa Diners, Drive-Ins uye Dives
I6 Mabhidhiri Ekutengesa Akanakisisa Anotenga muna 2016
Idya kunze kweZuva Rokuonga muKugona City
Vanhu veHawaii - Iro uye Nhasi
Tarisa kunze kweGay Top Bars muSeattle
Seattle / Tacoma Holiday Holiday Krisimasi Light Shows